Tag: dhiirrigelinta blog | Martech Zone
Tag: dhiirrigelinta bogga
Istaraatiijiyad ku-guuleysiga balooggu ma sahlana laakiin sidoo kale maahan saynis gantaal. Dadka qaarkiis waxay u maleynayaan "Haddii aad wax ku qorto, way imaan doonaan…" laakiin waxba run ugama sii dheereyn karaan. Xaqiiqdii, waxaad si dabiici ah u soo jiidan kartaa dadkaaga bartaada waqti ka dib xitaa waad ku qanacsan tahay taas. Laakiin haddii aadan helin nooca tirooyinka aad u baahan tahay si aad u sii wadato istiraatiijiyad ballaadhan oo blog ah oo aad ku soo noqotid waqtiga aad kharash gareyso,
Sabtida, Diisambar 22, 2012 Douglas Karr
Waxaan ku qornay maqaal faahfaahsan oo ku saabsan sida loo hagaajiyo boostadaada soo socota. Qoraalkan macluumaadka ee ka socda DivvyHQ, oo ah codsi kalandarka tifaftirka oo aan lahayn warqad-xisaabeed, wuxuu maraa tallaabooyin qaar si kor loogu qaado waxyaabahaaga ka dib markii la daabaco. Shayga kaliya ee aan xoogaa ka labalabaynayo ayaa ah weydiinaya qorayaasha kale inay ku dhiirrigeliyaan waxyaabahaaga. Haddii aad qorto waxyaabo aad u wanaagsan, qorayaasha kale ee internetka wax ku qora ayaa la wadaagi doona feel Waxaan dareemayaa inay xoogaa edeb darro tahay oo keliya in la weydiiyo. Waxaan ku badali karaa sheygan lacag bixin
Waxaan had iyo jeer u sheegnaa macaamiisheenna inaysan ku filneyn kaliya in la qoro qoraalo qoraallo ah. Marka qoraalkaaga la qoro, waxaad u baahan tahay inaad ogeysiiso dhagaystayaasha bartilmaameedka ah inay jiraan… tan waxaa lagu gaari karaa iyada oo lagu soo bandhigo hordhac barta Twitter-ka, Facebook, isku xirka boggag dheeri ah, u dirida ogeysiisyada emaylkaaga, iyo u gudbinta calaamadaha bulshada. goobaha meel kasta. Dadka badankood kuma soo noqdaan goob maalinba maalinta ka dambeysa qaarna waa iska qori doonaan